डाउनलोड HMA Hotspot VPN & Proxy को लागी iOS
डाउनलोड HMA Hotspot VPN & Proxy
प्लेटफर्म: iOS भाषा: अंग्रेजीफाइल साइज:
नि:शुल्क डाउनलोड को लागी iOS
HMA VPN इन्टरनेटमा धेरै समय खर्च गर्नेहरूका लागि भरपर्दो सहायक र संरक्षक हो। कार्यक्रमले डाटा चुहावट रोक्न र नेटवर्कबाट विभिन्न प्रकारका खतराहरूबाट तपाईंको मोबाइल फोनलाई जोगाउन सक्षम छ।
यो भरपर्दो र सुरक्षित VPN सेवाको आधिकारिक मोबाइल एप हो, जसलाई HideMyAss! पनि भनिन्छ। यसको साथ, तपाईंले आफ्नो व्यक्तिगत डेटालाई इन्टरनेटबाट विभिन्न खतराहरूबाट जोगाउनुहुनेछ, सार्वजनिक Wi-Fi नेटवर्कहरूमा जडान हुँदा पनि। यो गर्नको लागि, कार्यक्रमले सबैभन्दा उन्नत ईन्क्रिप्शन प्रोटोकलहरू प्रयोग गर्दछ र विश्वभर अवस्थित सुरक्षित सर्भरहरू मार्फत ट्राफिक पास गरेर प्रयोगकर्ताको वास्तविक स्थानको बारेमा डाटा लुकाउँछ। कुलमा, प्रयोगकर्ताले 280 भन्दा बढी स्थान विकल्पहरूबाट छनोट गर्न सक्छ, वा इष्टतम सर्भरको स्वचालित चयन छनौट गर्न सक्छ।
अनुप्रयोगको मुख्य विशेषताहरू मध्ये एक स्ट्रिमिङ भिडियोहरू हेर्नको लागि अनुकूलित विशेष सर्भरहरूको उपस्थिति हो। यसले विदेशी स्ट्रिमिङ सेवाका प्रशंसकहरूलाई भिडियो बफरिङ र अव्यावहारिक रूपमा लामो डाउनलोडहरू बिना आफ्नो मनपर्ने चलचित्र र शृङ्खलाहरू हेर्नको लागि अनुमति दिनेछ। तपाइँ अनुप्रयोग सेटिङहरूबाट त्यस्ता सर्भरहरूमा जडान गर्न सक्नुहुन्छ। र एक राम्रो थप विभाजन टनेलिङ प्रकार्य हुनेछ, जसको लागि चयनित कार्यक्रमहरूबाट ट्राफिकलाई VPN लाई बाइपास गर्न अनुमति दिन सकिन्छ, जसले जडान तोड्ने आवश्यकतालाई हटाउँछ।
कार्यक्रमका सुविधाहरू र फाइदाहरू:
विश्वभरका २८०+ स्थानहरूमा अवस्थित सर्भरहरूको समृद्ध चयन;
बलियो सैन्य-ग्रेड गुप्तिकरण;
व्यावहारिक रूपमा जडान गति कटौती गर्दैन;
स्ट्रिमिङ भिडियो हेर्नको लागि अनुकूलित विशेष सेवाहरू छन्;
तपाईंलाई टोरेन्टहरू डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ;
दुबै आईफोन र आईप्याड र आइपड टचमा राम्रो काम गर्दछ;
अंग्रेजी मा सरल र स्पष्ट इन्टरफेस;
दिन वा रातको कुनै पनि समयमा समर्थन सेवासँग सञ्चार।
कृपया ध्यान दिनुहोस् कि iOS को लागि HMA हटस्पट VPN र प्रोक्सी एप रूसी एप्पल एप स्टोरमा उपलब्ध छैन, त्यसैले तपाईंले यसलाई डाउनलोड गर्न सेटिङहरूमा क्षेत्र परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। VPN प्रयोग गर्न, तपाईंले सशुल्क सदस्यता खरिद गर्न आवश्यक छ।
नि:शुल्क डाउनलोड HMA Hotspot VPN & Proxy को लागी iOS प्लेटफर्म.
HMA Hotspot VPN & Proxy चश्मा